Evercontact: Melite ozi kọntaktị gị na Inbound Email Signatures | Martech Zone
Fraịde, Machị 21, 2014 Tuesday, January 6, 2015 Douglas Karr
Ihe dị ka ọkara elekere gara aga, onye PR kpọrọ m ka m malite mkparịta ụka n'ịntanetị online Azara m ekwentị ahụ wee sị, "Ndewo Rebecca - Adị m njikere ịga!" o juru ya anya na m maara onye na-akpọ ya. Ihe kpatara m ji mara bụ na Rebecca kpọtụrụla m oge ole na ole iji hazie ihe omume ahụ na agbakwunye nkọwa kọntaktị ya na kọntaktị Google m, ma mekọrịta ya na ekwentị m.
Ọ bụ ọrụ dị egwu akpọrọ Kpoo. Evercontact jiri nlezianya na-enyocha email gị na-abata ma na-enriches nkọwa kọntaktị na akwụkwọ adreesị gị na CRM. Evercontact na-akwado Gmail, Ngwa Google, Outlook, na Ahịa.
Kasị mma, ịkwesighi ịme ihe ọ bụla - Evercontact na-enyocha email gị na-abata maka ntinye aka email na ndabere ma na-emelite nkọwa kọntaktị na akpaghị aka. Ọbụna ha na-enye akụkọ kwa ụbọchị banyere mgbanwe ndị ahụ!
Tags: mgbe obulaGmailngwa ngwa googleele ihe anyandị ahịamekọrịta kọntaktịmelite kọntaktị
Ntinye aha enweghị ntụkwasị obi dị ka isi data. M na-atụ aro kama ijikwa kọntaktị site na iji GlipMe, nke ahụ nwere ike inye GMail na ekwentị ọ bụla nwere kọntaktị emelitere.
Enweghị m ike ịhụ mbinye aka dị ka isi iyi data na-enweghị ntụkwasị obi.
nke a bụ ihe evercontact kọrọ site na mail gmail m: “Naa Ozi Ọma: Bummer! Adịghị ka sistemụ anyị hụrụ kọntaktị ọ bụla iji melite maka gị taa, mana n'oge na-adịghị anya. :) ”
edebanye aha bụ naanị aka ike ederede na ederede ederede…